Ahoana ny fomba hampiasana ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra (Showtimeanytime.com/activate) - Ahoana No
Ahoana ny fomba hampiasana ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra?
Showtime Anytime dia fampiharana izay tariby na zanabolana, ary na dia ny mpikirakira mivantana mivantana aza dia afaka mampiasa streaming maimaim-poana amin'ny Showtime any an-trano na amin'ny toerana rehetra.
Showtime Anytime dia serivisy iray izay manome fidirana eo noho eo amin'ny vanim-potoana feno tsy andoavam-bola amin'ny andiany Showtime Original Series, sarimihetsika malaza, fanatanjahan-tena, komity manokana, ary maro hafa, ary azonao atao ny mijery izay mandeha amin'izao fotoana izao amin'ny Showtime. Topazo maso isaky ny misy na aiza na aiza no tadiavinao, amin'ny fitaovana rehetra anohana anao any Etazonia.
Showtime Anytime dia misy maimaim-poana amin'ny maha-ampahan'ny famandrihana Showtime anao.
Ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra dia azo alaina amin'ny sehatra samihafa any. Raha efa manana mpikambana ao amin'ny Showtime ianao dia maimaim-poana ny manampy amin'ny mpikambana Showtime. Noho izany, tsy misy fandaniana fanampiny amin'ny Showtime Na Rahoviana na Rahoviana.
Showtime Anytime dia iray amin'ny serivisy aloa, noho izany dia mila mividy hampiasa ny serivisy amin'ny gadget isika. Ny fotoana fisehoana amin'ny fotoana rehetra dia misy amin'ny fanadihadiana ihany koa any Etazonia.Ny mpanjifa TV Box dia afaka mampihetsika ny fotoana ampisehoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny fitsidihana ilay tranonkala amin'ny fahitalavitra Smart fotsiny. Manolotra fandaharana amin'ny fahitalavitra tsy manam-paharoa.
Tsy mila manantitrantitra ianao raha tsy manana ny maha-mpikambana anao, ny Showtime Anytime kosa dia manolotra preliminary maimaim-poana amin'ny fampisehoana amin'ny fotoana rehetra.com/activate.Mampiasà mora foana ny Showtime amin'ny fotoana rehetra ary manomboka mijery fialamboly tsy misy farany. Raha efa nanana fidirana mpamatsy fahitalavitra mandray anjara ianao dia araho fotsiny ny dingana Showtime Anytime mba hihetsika avy hatrany.
Dingana hampavitrika ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny Roku:
Fomba hanodinana ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny Roku -
Voalohany, alao antoka fa navadika tanteraka ny Roku anao.
Amin'izay fotoana izay dia zahao ny mpikarakara tranokalao.
Manaraka, mila ataonao ny, mankany amin'ny https://www.roku.com/ mifandray, miditra amin'ny firaketanao, ary mankanesa any amin'ny magazay fantsona Roku.
Aorian'izany dia tsy maintsy mankany amin'ny showtimeanytime.com/activate amin'ny tranokalan'ny tranonkala ianao.
Rehefa eo amin'io fotoana io ianao dia tsindrio fotsiny ilay 'ampidiro fantsona' ary ampandehano ny fantsom-pifandraisana Showtime Anytime.
Alefaso ny Roku anao ary zahao ny efijery 'Home'.
Avy eo, mandehana any amin'ny Settings> rafitra hafa> Fanavaozana ny rafitra> Hamarino izao.
Amin'izay fotoana izay dia mandehana any amin'ny fivarotana fantsona ary tadiavo ny fantsona Showtime Anytime.
Tsindrio ny fantsona tafiditra.
Azonao atao ny mahita, amin'izao fotoana izao showtimeanytime.com/activate fantsona dia azo idirana amin'ny lisitry ny fantsona Roku.
Mila mandefa ny fantsona Showtime Anytime ianao mba hamerenanao ny kaody fantsonao.
Mandehana any amin'ny solosainao, manorata fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra.com/activate.
Tsindrio izao ny safidy Roku fisoratana anarana.
Ampidiro amin'ny kaody fampihetseham-po Showtime Anytime.
Safidio izao ny bokotra Add.
Rehefa afaka fotoana fohy, dia hamelombelona indray ny Roku anao ary vonona ianao hijery ilay showtimeanytime.com/activate.
Dingana tokony hampiasana ny fandaharana amin'ny fotoana rehetra amin'ny Apple TV:
Ireto ny dingana momba ny fomba hampiasana ny Showtime amin'ny fotoana rehetra amin'ny Apple TV:
Voalohany, sokafy ny fampiharana Showtime amin'ny Apple TV.
Ankehitriny, sokafy izay programa rehetra ao amin'ny fantsona Showtime ary safidio ny bokotra Play.
Safidio izao avy amin'ny lisitry ny mpamatsy anao ny mpanome fahitalavitrao.
Ataovy ao an-tsaina, Eto, mety angatahina ianao hiditra ao amin'ny kaontinao Showtime hanamafisana ny fisoratana anarana.
Aorian'ny fisafidianana dia hiseho ny kaody fampandehanana amin'ny Apple TV. Soraty, araka izany.
Izao ny tokony hataonao dia, sokafy ny www.showtimeanytime.com/activate ao anaty tranokala amin'ny solosainao, tablette na telefaonao.
Manaraka, raha tsy miditra avy hatrany ianao dia tsindrio ny bokotra fidirana ary avy eo ampiasao ny solonanarana sy ny teny miafina nomen'ny mpamatsy tolotra hiditra ao amin'ny kaontinao.
Ankehitriny ianao dia mila mampiditra ny kaody fampidiranao ao anaty boaty kaody fampandehanana banga.
Ary raha vantany vao voamarina ny kaody fampandehanana avy amin'ny Apple TV dia hisy hafatra hiseho eo amin'ny efijery.
Ankehitriny, afaka manomboka mijery ny andian-tsarimihetsika Showtime tianao sy sarimihetsika Showtime ianao amin'ny Showtime Anytime amin'ny Apple TV.
Dingana tokony hampiasana ny fandaharana amin'ny fotoana rehetra amin'ny Xbox One:
Showtime koa nilatsaka tamin'ny Xbox One. Ireto ny dingana momba ny fomba hampiasana ny Showtime amin'ny fotoana rehetra ao amin'ny Xbox One ary hijery ny fidirana tsy misy fetra amin'ny seho sy sarimihetsika Showtime amin'ny fotoana rehetra tadiavinao:
Sokafy ny fampiharana Showtime amin'ny Xbox One anao.
Manaraka, manandrama Milalao programa amin'ny fantsona Showtime Anytime.
Safidio izao avy amin'ny lisitra ny mpamatsy fahitalavitrao.
Aorian'ny fisafidianana ny mpamatsy dia hiseho ny kaody fampandehanana eo amin'ny efijery Xbox One anao. Mariho izany.
Ankehitriny, sokafy ny www.showtimeanytime.com/activate ao anaty tranokala amin'ny solosainao, tablette na smartphone.
Ny dingana manaraka dia tsindrio ny bokotra LOGIN ary avy eo ampiasao ny solonanarana sy ny teny miafina nomen'ny mpamatsy tolotra hiditra ao amin'ny kaontinao.
Araho fotsiny ny torolalana ary ampidiro ao anaty boaty PIN fampidirana banga ny kaody fampidirana.
Raha vantany vao voamarina ny kaody fampandehanana avy amin'ny Xbox One dia hisy hafatra hiseho eo amin'ny efijeryo.
Ankehitriny, afaka manomboka mijery ireo andian-tsarimihetsika Showtime tianao indrindra ianao miaraka amin'ny Showtime Anytime amin'ny Xbox One anao na amin'ny toerana tianao.
Dingana tokony hampiasana ny fandaharana amin'ny fotoana rehetra amin'ny Samsung Smart TV:
Ny dingan'ny fampandehanana ny Showtime Anytime amin'ny Samsung Smart TV dia somary mora ihany ary mitovy amin'ny activation ShowTime Anytime amin'ny Apple TV. Ireto ny dingana amin'ny fomba fanaovana izany:
Voalohany, sokafy ny fampiharana Showtime amin'ny Samsung Smart TV anao ary avy eo manandrama Milalao programa amin'ny fantsona Showtime Anytime.
Avy eo, safidio ny mpanome fahitalavitra na mpanome tolotra mivantana ao amin'ilay lisitra.
Rehefa vita ny safidinao ny mpamatsy dia hiseho ny kaody fampandehanana amin'ny efijery Samsung Smart TV anao.
Ankehitriny dia mila mitsidika ny http://www.showtimeanytime.com/activate ianao amin'ny tranokala amin'ny PC, tablette na smartphone.
Raha sanatria ka tsy miditra an-tsokosoko ianao dia kitiho ny safidy LOGIN, ary avy eo azonao ampiasaina ny solonanarana sy ny teny miafina nomen'ny mpanome tolotra hiditra ao amin'ny kaontinao.
Araho ny torolàlana eo amin'ny efijery ary ampidiro ao anaty boaty kaody fampidirana banga ny kaody fampidirana.
Rehefa voamarina ny kaody fampahavitrihana dia hisy hafatra hiseho eo amin'ny efijery fahitalavitra.
Raha vantany vao vitanao soa aman-tsara ny dingana rehetra, dia ampandehanana amin'ny Samsung Smart TV ny Showtime, ary afaka manomboka mijery izay tianao ianao.
Dingana ahafahana mampihetsika ny fotoana fampisehoana amin'ny fotoana rehetra amin'ny TV Android:
Ireto misy ny dingana hampiasana ny Showtime amin'ny fotoana rehetra amin'ny TV Android anao:
Voalohany indrindra, mankanesa any amin'ny Google Play Store amin'ny fahitalavitra Android anao ary avy eo sintomy fotsiny ny app Showtime.
Ny dingana manaraka dia ny fanokafana ny fampiharana Showtime amin'ny fahitalavitra Android anao ary avy eo manandrana milalao seho na sarimihetsika amin'ny fantsona Showtime Anytime.
Aorian'izany, safidio ny fahitalavitra na mpanome tolotra mivantana ao amin'ilay lisitra.
Vantany vao misafidy ny mpamatsy ianao dia haseho ny kaody fampandehanana amin'ny efijery TV Android anao.
Izao fotsiny no mila ataonao dia ny mandeha amin'ny www.showtimeanytime.com/activate amin'ny tranonkala iray amin'ny PC-nao, tablette na smartphone-nao.
Ny zavatra manaraka dia, kitiho ny safidy LOGIN ary avy eo ampiasao ny solonanarana sy ny teny miafina nomen'ny mpamatsy tolotra hiditra ao amin'ny kaontinao.
Araho izao ny torolàlana eo amin'ny efijery ary ampidiro ao anaty boaty kaody fampidirana banga ny kaody fampidirana.
Raha vantany vao voamarina ny kaody fampahavitrihana dia hisy hafatra fahombiazana hiseho eo amin'ny efijery TV.
Afaka manomboka mijery izay tadiavinao amin'ny Showtime amin'ny fahitalavitra Android anao ianao izao.
Ankafizo ny seho amin'ny fotoana rehetra amin'ny sehatra samihafa:
Azonao atao ny mampiasa azy mora foana amin'ny gadget toy ny Amazon Fire TV, Apple TV, Android TV, Chromecast, LG TV, Roku, Samsung TV, Xbox One, ary maro hafa. Noho izany, na inona na inona gadget ampiasainao hijerena sary mihetsika sy fahitalavitra, dia azo ampiasaina matetika tsy misy olana ny Showtime Anytime.
Showtime Anytime dia fikambanana iray izay mahatonga ny tranombokim-baovao ho lehibe tokoa. Azonao atao ny mahita ireo sary mihetsika tsy tambo isaina, fisehoan'ny fahitalavitra, fampisehoana parody mijoro ary bebe kokoa amin'ity mpanome tolotra ity. Ary koa, ny zavatra tsotra indrindra amin'ny Showtime Anytime dia ity zavatra ity dia azo idirana amin'ny tanjona ambony. Matetika dia tena sarobidy tokoa izy io satria hampiasa an'ity rindrambaiko ity amin'ny gadget na inona na inona nefa tsy manasongadina ny fenitra. Ankoatr'izay, ny fampiasana an'ity rindranasa ity ho an'ny firohotana dia tsotra tokoa noho ny UI an'ity tranonkala ity. Ity UI ity dia mahatonga ny fitaovana ho hita ankehitriny ary milamina nefa tsotra be ampiasaina.
Ny serivisy fampisehoana amin'ny fotoana rehetra dia misy amin'ny:
Amazon‌ ‌TV‌ ‌
SHO.com‌ ‌ (ny ‌own‌ ‌official‌ ‌website) ‌ ‌etc.‌
Satria io serivisy io dia tsy misy afa-tsy any Etazonia ihany. Ireo mpampiasa azy dia tokony hitadidy fa ny tranonkala sy ny fantsona dia mety manampy ny kaontinanta sy ny manodidina azy fotsiny.
Ireto misy mpanome fantsona manaraka miaraka amin'ny Showtime Anytime avy amin'ny fianakavian'i Showtime -
Endri-javatra amin'ny Showtime amin'ny fotoana rehetra:
Azonao atao ny mijery ny zava-mitranga mivantana, na ny Showtime East sy ny Showtime West, ary afaka mifanakalo eo amin'ny fantsona arakaraka ny takinao koa ianao.
Manampy anao amin'ny fandaminana sy ny fahitana ireo tetik'asa tianao amin'ny Showtime na oviana na oviana.
Azonao atao ny misintona ny horonantsary sy ny seho an-tsarimihetsika tianao indrindra amin'ny boaty Smart TV Box tianao ary hijerena azy ireo any aoriana rehefa tsy ivelan'ny Internet ianao.
Azonao atao koa ny mijery ny seho indray izay nijanonanao tamin'ny gadget hafa.
Azonao atao ny mampiasa azy io hijerena azy ireo amin'ny gadget misy ny safidinao toy ny Tablet, Telefaona, TV, na koa amin'ny PC-nao.
Nosoratanay ny fomba hampiasana ny Showtime amin'ny fotoana rehetra etsy ambony. Manantena izahay fa ity torolàlana amin'ny antsipirihany sy tsikelikely amin'ny fomba fampandehanana ny Showtime amin'ny ora ity amin'ny fitaovanao amin'ny alàlan'ny Showtime amin'ny fotoana rehetra.com/activate dia nanampy anao tamin'ny famelana anao hampandeha ny Showtime Anytime amin'ny smartphone.
VPN tsara indrindra ho an'ny taona (2020)
Mijere fandaharana amin'ny fahitalavitra amin'ny Internet
Ahoana no manamboatra Netflix Tsy miasa?
Headphones tsara indrindra ho an'ny iPhone 12, 12 Pro Max & Mini
hadisoana amin'ny serivisy etona isaky ny mandeha
ny fomba ahazoana robux maimaim-poana amin'ny mac
misintona sarimihetsika famoahana vaovao maimaim-poana
lisitry ny lalao cross platform ps4
setroka haharitra hafiriana vao ahazoana famerenam-bola